बच्चालाई भान्छाको काममा लगाउदा चकित पर्ने गरिका फाइदा छन् - यादका टुक्रा
बच्चाले घरमा धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाउँछन् । तर, त्यसका लागि उनीहरुलाई बन्देज गर्ने होइन, बरु घरायसी काममा सरिक गराउनु पर्छ । जस्तोे, बगैंचाको फूलमा पानी हाल्न लगाउने, करेसा बारीमा खटाउने । यसले उनीहरुले नयाँ नयाँ अनुभव आर्जन गर्छन्, जो जीवनोपयोगी हुन्छ । भान्साको काममा समेत बच्चालाई खटाउन सकिन्छ । तरकारी काट्न, केलाउन, चिया पकाउन, ब्रेडमा जाम लगाउन जस्ता सामान्य काममा आफुसँगै खटाउनु पर्छ । यसबाट उनीहरुले मनोरञ्जन त लिन्छन् नै, अनुभव पनि ।
रचनात्मकतालाई प्रोत्साहित गर्ने : बच्चालाई सजिलो खानेकुरा बनाउने कला सिकाउनु पर्छ । जस्तो चिया पकाउने, अण्डा उसिन्ने । यससँगै उनीहरु क्रमस भान्सामा काम गर्न अभ्यस्त हुन्छन् । तर, बच्चाको काममा कतै बाधा नगर्नुहोस् । उसको इच्छा अनुसार खानेकुरा पकाउन दिनुहोस् ।
बिज्ञान र गणितको ज्ञान : जब बच्चा भान्सामा काम गर्न सिक्छन्, त्यसले उनीहरुमा धेरै फाइदा पुग्छ । एक त उनीहरुले श्रम गर्न सिक्छन्, पाककलाको ज्ञान पाउँछन् । सहयोग गर्ने बानीको विकास पनि हुन्छ । यससँगै शैक्षिक ज्ञान समेत हासिल गर्न सक्छन् । अन्डा गन्न, आधा कप दुध नाप्ने जस्ता सानोतिनो कामले उनीहरु थाहै नपाई गणितिय ज्ञान आर्जन गर्न पुग्छन् । साथै घोल्ने, जमाउनेदेखि तापमान सम्बन्धी अन्य कुरा भान्सामा व्यवहारिक रुपमै सिक्छन् ।
निर्देशन पालना गर्न सिकाउने : कुक बुकको रेसेपी पढेर त्यही अनुसार खानेकुरा पकाउन सिकाउन सकिन्छ । यसले उनीहरुको शब्द ज्ञान समृद्ध हुन्छ । साथसाथै शब्द उच्चरणमा पनि सुधार हुन्छ । यसका साथै कुनैपनि निर्देशनलाई कसरी कुशलतापूर्वक पालना गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउन सकिनेछ ।
खानाको पोषणको बारेमा जानकारी : जब बच्चा खाना बनाउने प्रक्रियामा समेल हुन्छन्, उनीहरु त्यही खानेकुरा खान उत्सुक रहन्छन् । किनभने आफुले पकाएको खानेकुरा कस्तो भयो होला भन्ने कौतुहलता हुन्छ । यस हिसाबले उनीहरुमा खानेकुरामा रुची जाग्न थाल्छ । साथै कुन खानेकुरामा कस्तो गुण हुन्छ भन्नेदेखि त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेसम्मको जानकारी मिल्छ ।
भान्सामा सुरक्षित रहन सिकाउने : बच्चालाई किचनमा आमन्त्रित गरेपछि उसलाई सुरक्षित ढंगले काम गर्न पनि सिकाउनु पर्छ । भान्साका सामग्रीहरु जस्तो ग्याँस चुल्हो, मिक्सचर, चक्कु, फ्रिज , ओभन कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनु पर्छ ।
Don't Miss it गर्भवतीले यी कुराहरु याद नगर्दा रोगी बच्चा जन्मिन सक्छ, ख्यालख्याल गर्न हुन्न
Up Next भर्खरै जन्मिएका बच्चालाई कसरी नुहाइदिने ? नजानेमा जे पनि हुन सक्छ,
बच्चाका लागि आमाबुवा नै आफ्नो आदर्श हुन् । आमाबुवाले गर्ने, बोल्ने, सोच्ने सबै कुराको प्रभाव बच्चामा पर्छ । बच्चाले आमाबुवाको…
1 month ago 3663 Views
पुराना सामान राखेर पनि यसरी सजाउन सकिन्छ घर, खर्च कम तर शान ज्यादा
जब हामी नयाँ घरमा प्रवेश गर्ने तयारीमा हुन्छौं, हाम्रो साथमा धेरै काम नलाग्ने सामानहरु निस्कने गर्दछन् । नयाँ घर नसर्दा…
किन चढाइन्छ त मन्दिरमा नरिवल ? नफुटाउदा के हुन्छ र कसरी फुटे के अर्थ लाग्छ ?
भक्तजनहरुले मन्दिरमा सवैभन्दा बढी फूल चढाउँछन् । त्यसपछि नरिवलको प्रयोग बढी हुन्छ । नरिवललाई संस्कृतमा नारिकेल भनिन्छ। श्रीफला पनि भनिन्छ…
2 months ago 324 Views
कस्तो समयमा खतरनाक हुनसक्छ फूड प्वाइजनिङ ?
कति खानेकुरा एकसाथ सेवन गर्नु राम्रो मानिदैन । त्यस्ता विजातिय खानेकुरा सेवन गर्दा पाचन प्रक्रियामा समस्या हुन्छ । दुषित, विषाक्त…